မောင်နိုင် အတွေးများ: May 2009
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့အပေါ် တရားစွဲတင်သင့်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီ
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ သူ့အပေါ် ချမှတ်ထားတဲ့ တားမြစ်ကန့်သတ်မိန့်ကို ချိုးဖောက် တယ်လို့ စွပ်စွဲပြီး တရားရုံးတင်စစ်ဆေးတာတွေ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ ၅ ရက်မြောက်နေ့မှာပဲ သူ့အပေါ် တရားစွဲဆိုဖို့ တရားခွင်က ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပေါ် စွပ်စွဲချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ အခုတပတ်လုံးလုံး မရပ်မနား စစ်ဆေးနေတဲ့ တရားခွင်က နောက်ထပ် တရားလိုသက်သေတချို့ကို စစ်ဆေးမေးမြန်းတာတွေ လုပ်ခဲ့ပြီး အခုလို ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါ။ ဒီလို တရားစွဲတင်လိုက်ပြီဆိုတော့၊ တရားခွင်မှာ စစ်ဆေးခဲ့တာတွေ၊ ရှေ့လျှောက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အတွက် ခုခံချေပဖို့ အလားအလာတွေ ကရော ဘယ်လို ရှိနိုင်မလဲ၊ တရားခွင်က နောက်ဆုံး အခြေအနေတွေကို စောင့်ကြည့်နေတဲ့ ကိုအောင်လွင်ဦးက တင်ပြထားပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ရန်ကုန်အင်းစိန်ထောင်တွင်း အထူးတရားခွင်တခုမှာ ရုံးတင်စစ်ဆေးတာ ၅ ရက်မြောက်တဲ့ နေ့မှာတော့ တားဆီးကန့်သတ်မိန့်ကို ဖောက်ဖျက်တယ် ဆိုပြီး သူ့အပေါ် စွပ်စွဲထားတဲ့အတိုင်း ပုဒ်မ (၂၂) နဲ့ တရားစွဲတင် လိုက်တာပါ။ ၅ ရက်လုံးလုံး တရားလို သက်သေတွေက ဒီစွပ်စွဲချက်နဲ့ တရားစွဲတင်သင့်၊ မတင်သင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့ သက်သေ ထွက်ဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက် မွန်းလွဲပိုင်း တရားခွင် ပြန်ကြားနာတဲ့ အချိန်မှာပဲ တရားရုံးက တရားစွဲတင်သင့်တယ် ဆိုပြီး ဆုံးဖြတ် လိုက်တာပါ။
တရားရုံး ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ ကျန်သူတွေ အားလုံးကတော့ အပြစ်မရှိကြောင်းပြောပြီး ဆက်ပြီးတော့ ခုခံချေပသွားဖို့ ရှိတယ်လို့ ဥပဒေ အကျိုးဆောင် ရှေ့နေကြီး ဦးကြည်ဝင်းက ပြောပါတယ်။
“စွဲချက်ကတော့ အခုတရားစွဲထားတဲ့ ပုဒ်မတွေအတိုင်းပေါ့။ ပုဒ်မ (၂၂) တရားစွဲချက် တင်တယ်။ ဒေါ်စုက အပြစ်မရှိဘူးလို့ လျှောက်လဲလိုက်တယ်။ နောက်ပြီးတော့ ခင်ခင်ဝင်း ကလည်း အပြစ်မရှိဘူး၊ နောက်ပြီးတော့ ၀င်းမမ လည်း အပြစ်မရှိဘူး၊ မစ္စတာ ယက်တော ကလည်း အပြစ်မရှိဘူး။ အဲဒီလိုပေါ့၊ နောက်ပြီးတော့ သက်သေတွေ ပြန်ခေါ်။ သက်သေ ၈ ယောက် ပြန်ခေါ်မယ်တဲ့။ ဦးဉာဏ်ဝင်း ပြောတာနော်။ အဲဒါပါပဲ။ စွဲချက်တင်တဲ့အပေါ် စွဲချက်ကို ထပ်ပြီးတော့မှ အပြစ်ရှိလားမရှိလား မေးတော့ အပြစ်မရှိဘူး။ ဘာဖြစ်လို့မရှိလဲ၊ စွဲချက်တင်တဲ့အတိုင်း ကျူးလွန်ခြင်းမရှိလို့ အပြစ်မရှိဘူး။ ဒါပါပဲ။”
ရုံးချိန်းရက်ကိုတော့ လာမယ့် တနင်္လာနေ့ကို ပြန်ချိန်းလိုက်ပါတယ်။
အခုလို တရားစွဲတင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် ဆိုပေမယ့်လည်း ကြားနာစစ်ဆေးစဉ်ကာလ တလျှောက် တရားလို သက်သေ တွေ ဘက်က အစစ်ခံထွက်ဆိုချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိနိုင်တာတွေက အများအပြား ရှိနေတယ်လို့ ယူဆနေသူတွေလည်း ရှိနေကြတာပါ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ အမှုမှာ အကျိုးဆောင်ပေးဖို့ ကျိုးပမ်းခဲ့ပေမဲ့ မရခဲ့ဘဲ ရှေ့နေလိုင်စင်ပါ အသိမ်းခံထားရတဲ့ ဥပဒေပညာရှင် ဦးအောင်သိန်း ကတော့ အာဏာပိုင်တွေရဲ့ စွပ်စွဲချက်တွေ တရားခွင် အတွင်း စစ်ဆေးမှုတွေမှာ မေးစရာတွေ အများအပြား ရှိနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
“တရားခွင်မှာ ၀တ်ရုံ ၀တ်ပြီးတော့ demonstration လုပ်ပြတယ်ပေါ့နော်။ အဲဒီ ၀တ်ရုံဟာ ဘယ်အတွက် ဘယ်လို ရည်ရွယ်ချက် နဲ့ သူ ယူလာတာလဲ ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေရယ်။ နောက်တချက်က အဲဒီ ၀တ်ရုံနှစ်ခုကို demonstration လုပ်ပြတာ ဟာ ဘာအတွက် လုပ်ပြတာလဲ ဆိုတဲ့အချက်အလက်တွေပေါ့ဗျာ။ ဒီဟာတွေလည်း ပေါ်ပေါက်ဖို့ လိုတယ်ဗျ။ နောက်တခါက ပထမအကြိမ် ၃၀ ရက် ၁၁ လ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တုန်းက သူလာတဲ့ဟာ ဘယ်ကနေ လာသလဲ။ ဘယ်လမ်းကြောင်းကနေ လာသလဲ။ အဲဒီကိစ္စတွေလည်း ကျနော်တို့ လိုတယ်နော်။ အိမ်နောက်ဖေး ဘက်ကို ရောက်သွားပြီးတော့ ခြံဝ နောက်ဖေး ဘက်ကို အဲဒီကနေ Book of Morman စာအုပ်တအုပ်ကို ချထားပြီးတော့ သွားတဲ့ဆိုတဲ့ဟာပဲ ပေါ်ပေါက်တယ်။ ပထမ တကြိမ် သူလာသွားတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဒီဟာက သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်ကို အကြောင်းကြားမှု လုပ်လားမလုပ်လား ဆိုတာ ခိုင်ခိုင်မာမာ ကျနော်တို့ ဒါလည်း မသိရဘူး။ ဒီ ဆာရီ ၀တ်ရုံလို ၀တ်ပြီးထွက်သွားရင် မမြင်လိုက်ဘဲနဲ့ ၀တ်ရုံဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို သူတို့က ခိုးထုတ်သွားမယ့် ပုံစံမျိုးလား။ သို့မဟုတ်ရင် ဒေါ်ခင်ဝင်း တို့ သားအမိ နှစ်ယောက် အတွက်လား။ သို့မဟုတ်ရင် သူနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တို့ ၀တ်ဖို့လား။ ဒီလို လားပေါင်းများစွာ စဉ်းစားစရာ အချက်တွေ အများကြီးပေါ့ဗျာ။”
အာဏာပိုင်တွေဖက်က သက်သေခံချက်တွေ၊ အထူးသဖြင့်ကတော့ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဆိုသလို သံတမန်တွေ စာနယ်ဇင်း သမားတွေကို တရားခွင်ဝင်ရောက်ခွင့် ပေးတဲ့နေ့မှာ အစစ်ခံရမှာ ထူးထူးခြားခြား မူဆလင်အမျိုးသမီးတွေ ၀တ်ဆင်လေ့ ရှိတဲ့ ၀တ်ရုံကိုဝတ်ပြီး သရုပ်ပြတာမျိုးတွေ လုပ်ခဲ့တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေအပေါ် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိလိုနေကြတာပါ။ ဥပဒေ အကျိုးဆောင်ရှေ့နေကြီး ဦးကြည်ဝင်းကတော့ ဒီလို ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ထွက်ဆိုနေပေမယ့် ဒါတွေဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပေါ် စွပ်စွဲထားတဲ့ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဥပဒေကြောင်းအရ အထောက်အကူ ဖြစ်စေတယ်လို့ မယူဆကြောင်း ပြောပါတယ်။
“ပြောနေတာက အဲဒီ ၀တ်စုံက ဒေါ်စုအိမ်မှာ သူက ထားသွားတယ်လို့ ပြောတယ်။ နဂိုကလည်း မသိဘူး။ အဲဒါကတော့ ယက်တော က သူ ထားခဲ့တဲ့ဝတ်စုံလို့ ဆိုတယ်။ ထားထား မထားထားပါ။ ဒါကလည်း အရေးမပါပါဘူး။ ကုလားဝတ်စုံဖြစ်ဖြစ် တရုတ်ဝတ်စုံ ဖြစ်ဖြစ် ဘာကြီးဖြစ်နေနေ အဲဒါ အပိုတွေပါ။ ဒါတွေက အမှုနဲ့ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ သူတို့ကတော့ ပြောတယ်။ ဒေါ်စုအိမ်မှာ ရောက်တယ်ပေါ့။ တည်းတယ်ပေါ့။ စားတယ်သောက်တယ်။ ဒါကို ပြောနေတာ။ စားတယ်သောက်တယ် ဆိုတာက စည်းကမ်းထဲမှာမှ မပါဘဲ။”
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဥပဒေအကျိုးဆောင် ရှေ့နေ ဦးကြည်ဝင်း ပါ။
တရားရုံးတင် ကြားနာမှုတွေ စခဲ့တဲ့ တနင်္လာနေ့ကစလို့ ဖြန့်ချထားတဲ့ လုံခြုံရေးတွေကတော့ တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ရှိနေတုန်း ပါ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ နေအိမ်ခြံဝင်းထဲကို တိတ်တဆိတ် ၀င်ရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အမေရိကန် နိုင်ငံသား တယောက် ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ အမှုဖြစ်တဲ့အတွက် သူ့သံရုံးက ၀င်ခွင့်ရတာကလွဲလို့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တုန်းကလို သံတမန်တွေ၊ စာနယ်ဇင်းသမားတွေကတော့ ၀င်ခွင့် မရတော့ပါဘူး။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အားပေးထောက်ခံကြောင်း ပြသဖို့ဆိုပြီး ရုံးတင်စစ်ဆေးတာတွေ လုပ်နေတဲ့ အင်းစိန် အကျဉ်းထောင် အနီးအနားကို သွားပြီး အားပေးနေသူတွေလည်း ရှိနေဆဲဖြစ်ပေမဲ့ ဒီနေ့ကတော့ ရန်ကုန်မှာ မိုးကလည်း အတော့်ကို ရွာနေတဲ့အတွက် လူက ခါတိုင်းထက် လျော့သွားတယ်လို့လည်း အဲဒီမှာ ရောက်သွားတဲ့လူတွေက ပြောပါတယ်။
Posted by မောင်နိုင် at 9:42 AM No comments:
သံတမန်များကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြော
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သံတမန်များကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည် ဟု ယနေ့နေ့လယ် တရားခွင်သို့ တက်ရောက်ခွင့်ရသည့် သတင်းထောက်များက ဆိုသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ မြန်မာသံရုံး အပြင်ဘက်၌ ကိုးရီးယား တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ တစ်ဦးက အကျဉ်းကျခံနေရသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သဏ္ဍာန် သရုပ်ပြနေခိုက် သတင်းထောက်များက ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းယူနေစဉ် (ဓာတ်ပုံ - Getty Images)
“ဒီကိုလာတဲ့အတွက်ကော အားပေးတဲ့အတွက်ပါ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်” ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်က သံတမန်များကို ပြောကြားခဲ့ကြောင်း AFP သတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအဝင် စွဲချက်တင်ခံရသည့် လေးဦးကိုရုံးတင်စစ်ဆေးသည့် တတိယ မြောက်နေ့ ဖြစ်သည့် ယနေ့နေ့လယ်ပိုင်း စစ်ဆေးမှုတွင် သံတမန် ၃၀ နှင့် သတင်းထောက် ၁၀ ဦးတို့ကို တက်ရောက်ခွင့် ပြုခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
မေ ၁၈ ရက်၊ ၁၉ ရက် နှစ်ရက်နှင့် ယနေ့နံနက်ပိုင်းတပိုင်းကို အများပြည်သူကြားနာခွင့် မရှိသော တံခါးပိတ်စစ်ဆေးသည့် တရားခွင်တွင် ရုံးတင်စစ်ဆေး ခဲ့ပြီး ၂၀ ရက်နေ့ နေ့လယ်ပိုင်း စစ်ဆေးမှုတွင်မှ ယခုကဲ့သို့ သံတမန်နှင့် သတင်းထောက်များကို တက်ရောက်ခွင့် ပြုလိုက်သည့်အတွက် အများက အံ့အားသင့်နေကြသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သံတမန်များကို တယောက်ချင်းစီ တွေ့ခွင့်မရသော်လည်း ယခုထက် ပိုမို ကောင်းမွန်သောနေ့တွင် တွေ့ဆုံခွင့်ရရန် မျှော်လင့်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်ဟု တရားခွင်သို့ တက်ရောက်ခွင့် ရရှိသည့် AFP သတင်းစာမျက်နှာတွင် ဆက်လက်ရေးသားထားသည်။
“တယောက်ချင်းစီ တွေ့ခွင့်ရဖို့ ကျမတောင်းဆိုခဲ့ပေမယ့် တွေ့ခွင့်မရတာကို စိတ်မကောင်းပါဘူး” ဟု ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဗဲလ်ဆုရှင်က သံတမန်များကို ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
စစ်ဆေးမှုအပြီးတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို စင်ကာပူ သံအမတ်၊ ထိုင်း သံတမန်၊ ရုရှားသံတမန်တို့နှင့် တွေ့ခွင့်ပေးသည်ဟု တက်ရောက်ခွင့်ရသူ နိုင်ငံခြားသတင်းဌာနတခုမှ သတင်းထောက် တဦးက ပြောပြ သည်။
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အင်္ဂလန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး မာ့ခ်ကန်းနင်းက “သူ့ကိုကြည့်ရတာ အားအင်တွေပြည့်ဝပြီး တည်တည်ကြည်ကြည်နဲ့ စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့ပုံပေါ်နေတယ်။ သူ့ ရှေ့နေတွေအတွက်တော့ အားရှိစရာပဲ” ဟု BBC သတင်းဌာနကို ပြောကြားခဲ့သည်။
တရားရုံးတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ပန်းရောင်အင်္ကျီ၊ အနီရောင်တွင် အဝါဖောက်ထားသော ယော လချည်တို့ဖြင့် ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်သည့် ပုံစံမြင်တွေ့ရကြောင်း တက်ရောက်ခွင့်ရရှိသည့် ပြည်တွင်း ဂျာနယ် သတင်းထောက်တဦးက ပြောပြသည်။
“ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပုံစံက ပုံမှန် တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပဲ။ အသားအရေကလည်း ကြည်ကြည် လင်လင်နဲ့ ပြုံးရွှင်နေတာတွေ့ရတယ်။ ရှေ့ဆုံးတန်းက သံတမန်တွေကို နှုတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့ တယောက်ချင်းစီကို ပြုံးပြတယ်” ဟု သူကပြောသည်။
ယမန်နေ့က ကြားနာစစ်ဆေးခဲ့သည့် အများပြည်သူကြားနာခွင့်မရှိသော တံခါးပိတ် တရားခွင်တွင်မူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ဟန်ရှိသော်လည်း အနည်းငယ်စိတ်တိုနေဟန် ရှိသည်ဟု အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ရှေ့နေ ဦးကြည်ဝင်းက သုံးသပ်သည်။
တရားခွင်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တခြားသူများကို နောက်မှီပါသော ထိုင်ခုံများတွင် တလံ အကွာစီခန့် ချဲကာ တရားသူကြီးနှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင် ထိုင်ခိုင်းထားကြောင်း ဦးကြည်ဝင်းက ဆက်ပြောပြသည်။
ယနေ့ တရားလိုပြသက်သေတဦးဖြစ်သော ရဲအရာရှိတဦးကို စစ်ဆေးရာ ၎င်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အိမ်အတွင်း ဝင်ရောက်ခဲ့သည်ဆိုသော မစ္စတာယက်ထောက နေအိမ်ဝင်းအတွင်း အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် အမျိုးသမီး ဝတ်စုံ ၂ စုံနှင့် စာအုပ် ၂ အုပ်ချန်ထားခဲ့သည်ဟု အစစ်ခံခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ထိုဝတ်စုံ ၂ စုံကို တရားခွင်တွင် အမျိုးသမီး ၂ ဦးက ဝတ်ပြထားသည်ဟု တက်ရောက်ခဲ့သူ တဦးက ဆိုသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အမှုကို ကြားနာစစ်ဆေးသော ယနေ့ တရားခွင်တွင် သံတမန်များ၊ နိုင်ငံခြား သတင်းဌာနများနှင့် ပြည်တွင်းမီဒီယာသတင်းထောက်များ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများအပါအဝင် လူ ၇၀ ခန့် တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း ကြားသိရသည်။
တရားခွင်သို့ နိုင်ငံခြားသတင်းဌာနများကို မဲနှိုက်ကာ မဲပေါက်သည့် ဌာန ၅ ခုကိုတက်ရောက်ခွင့်ပြုခဲ့ပြီး မြန်မာပုဂ္ဂလိကသတင်း မီဒီယာ ၅ ခုကိုမူ စာပေစိစစ်ရေးက ရွေးချယ်စေလွှတ်ခဲ့ကြောင်း ကြားသိရသည်။ တက်ရောက်ခွင့်ရသော ပုဂ္ဂလိကမီဒီယာထဲမှ အများစုမှာ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးနှင့် နီးစပ်သော မီဒီယာများ ဖြစ်သည်။
ထို့ပြင် အစိုးရမီဒီယာများအဖြစ် မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် မြန်မာသတင်းစဉ်တို့မှ သတင်းထောက်များ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ၎င်း မီဒီယာ ၂ ခုက တရားခွင်အတွင်း ဓာတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယိုများ ရိုက်ကူးခဲ့သော်လည်း ကျန်မီဒီယာနှင့် သတင်းဌာနများမှာ ကင်မရာများ ယူဆောင်ခွင့်မရခဲ့ကြောင်း ကြားသိရသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်အတွင်းသို့ မစ္စတာ ဂျွန်ဝီလျံယက်ထော ဝင်ရောက်ခဲ့သည်ဟု စစ်အစိုးရက စွပ်စွဲကာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အင်းစိန်ထောင်သို့ ပြောင်းရွှေ့၍ ရုံးတင်စစ်ဆေးခဲ့သည့်အတွက် အာဆီယံအပါအဝင် နိုင်ငံ တကာအသိုင်းအဝန်းနှင့် နိုဗဲလ်ဆုရှင်များက ဝိုင်းဝန်းပြစ်တင်ခဲ့ကြသည်။
မေလ ၁၉ ရက်နေ့ထုတ် အစိုးရသတင်းစာများတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို “တရားခံ” ဟု ခေါ်ဝေါ် သုံးစွဲ ထားသည်ကိုလည်း တွေ့ရသည်။
အင်္ဂလန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး မစ္စတာ မာ့ခ်ကန်းနင်းက “ဒီဇာတ်လမ်း ဘယ်လိုအဆုံးသတ်မယ်ဆိုတဲ့ ဇာတ်ညွှန်းက ရေးထားပြီးသားပါ။ ထွက်လာတဲ့အဖြေကတော့ ကောင်းမှာ မဟုတ်ဘူး” ဟု BBC သတင်း ဌာနကို ပြောကြားခဲ့သည်။
ဧရာဝတီ သတင်းဌာနမှာ ဖော်ပြချက်
Posted by မောင်နိုင် at 11:41 AM 1 comment:
နအဖ အခက် အမ်အယ်ဒီ အချက်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်ထဲ ဂျွန်ဝီလျံယက်တောဆိုတဲ့ အမေရိကန်ကြီးတဦး နှစ်ရက်ကြာ ၀င်ရောက်တည်းခိုသွားတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကြားရတော့
ဗိုလ်အောင်ဒင်ဇာတ်ကားထဲက စုံထောက်ကြီး ဦးဘချစ် သတင်းစာဖတ်ရင်း အကြီးအကျယ် ဒေါဖောင်းသွားတဲ့ သတင်းခေါင်းစီးကို သွားသတိရမိတယ်။
“ပုလိပ်တွေ ဘာလုပ်နေကြ သလဲ၊ လူဆိုးတွေမှာ ကိုယ်ပျောက်ဆေးရှိသလား” ဆိုတဲ့ သတင်းခေါင်းစီးပါ။ အခုလည်း နအဖ ဗိုလ်ချုပ်မှူးးကြီး သန်းရွှေနဲ့
အပေါင်းအပါတွေကို “နအဖတတွေ ဘာလုပ်နေကြသလဲ၊ ယက်တောမှာ ကိုယ်ပျောက်ဆေးရှိသလား” ဆိုပြီး
ခေါင်းစီးတပ် ရေးရမလိုဖြစ်နေပြီ။ ရယ်ရပုံများ ပြောပါတယ်။
ရယ်မောခြင်းရဲ့ နောက်ကွယ်မှာတော့ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အသက်အန္တရာယ်အတွက်လည်း စိုးရိမ်ပူပန်စိတ် အကြီးအကျယ် ဖြစ်မိပါတယ်။
တကယ်ဆို ကိုယ်အကျယ်ချုပ်ချထားတဲ့ လူထုခေါင်းဆောင်အတွက် အလုံးစုံတာဝန်ယူရမှာက နအဖပဲလေ။
အပြစ်မရှိတဲ့သူကို ကိုယ့်ဒုက္ခကိုယ်ရှာပြီး သူတို့ နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ချထားချင်တာကိုး။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ကျမအိမ်ကို လာစောင့်ရှောက်ပေးပါလို့ နအဖကို လုံခြုံရေးအနေနဲ့ ငှားထားတာမှ မဟုတ်တာ။
အဲဒီတော့ ယက်တောဆိုတဲ့ အမေရိကန်ကြီး အင်းလျားကန်ထဲကပဲ ကုန်းတက်လာ ကုန်းတက်လာ၊ ခြံစည်းရိုးကိုပဲ သူခိုးကြီး ငတက်ဖြားလို ခုန်ဝင် ခုန်ဝင်၊
မိုးပေါ်ကပဲ ကြောင်ကျ ကျလာ ကျလာ၊ လုံခြုံရေးတွေရှိတဲ့ ၀င်းတံခါးကပဲ ကိုယ်ပျောက်ဝိဇ္စာလို ကိုယ်ယောင်ဖျောက်ပြီး ၀င်သွား ၀င်သွား
လုံးဝတာဝန်ရှိတာကတော့ နအဖစစ်အုပ်စုမှာပါပဲ။ လုံခြုံရေးအပြည့်ပေးရမှာ သူတို့တာဝန်ပါ။ သူတို့ မတရားသဖြင့် အကျယ်ချုပ်ထားတာမို့လို့ပါ။
တကယ်လို့များ မပြောကောင်း မဆိုကောင်း ယက်တောက စိတ္တဇလူသတ်သမား ဖြစ်နေတယ် ဆိုကြပါစို့။ သူ နအဖလုံခြုံရေးတွေ မသိလိုက်ဘဲ ခိုးဝင်သွားလို့
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အသက်ပါတဲ့အထိ ဖြစ်သွားပါပြီတဲ့။ နအဖ ဘယ်လိုမျိုးဆင်ခြေတွေ ပေးမလဲ၊ ဘာလုပ်ပေးမှာလဲ စဉ်းစားကြည့်မိတော့
ကြက်သီးမွေးညင်း တောင် တော်တော်ထသွားမိတယ်။ အဲဒီလိုမျိုးများဖြစ်ခဲ့ရင် နအဖက ကျွန်တော်မျိုးတို့ မသိလိုက်လို့ ဖြစ်သွားတာပါ ခင်ဗျားလို့
ဆင်ခြေဆင်လက်ပေးရုံနဲ့ ပြီးနိုင်မလား။ ပြည်သူလူထုကြီးနဲ့ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းကရော အဲဒီအဖြေကို လက်ခံမလား။
ဒေါသတွေ ဘယ်လောက်တောင်များ ပေါက်ကွဲလိုက်ကြလေမလဲ။ အဲဒီပေါက်ကွဲမယ့် ဒေါသမုန်တိုင်းနဲ့ တင် နအဖ လွင့်စဉ်သွားလောက်မယ်ထင်ပါရဲ့။
၁၉၈၃ ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၂၁) ရက်နေ့က ပြည်တော်ပြန်လာခဲ့တဲ့ ဖိလစ်ပိုင် အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် ဘင်နစ်နိုအကွီနိုရဲ့
ဖြစ်အင်ကို အခုထိ အမှတ်ရနေမိပါသေးတယ်။ မနီလာလေဆိပ်အရောက်မှာ ဖိလစ်ပိုင်အာဏာရှင် မားကို့စ်က ဘင်နစ်နိုအကွီနိုကို တဖက်လှည့်နဲ့ လုပ်ကြံခိုင်းလိုက်တယ်။
ဒါပေမယ့် အဖြစ်မှန်ကို ဖိလစ်ပိုင်လူထုကြီးက သိသွားပြီး အကြီးအကျယ် အုံကြွပေါက်ကွဲပါလေတော့တယ်။ ဖိလစ်ပိုင်လူထုရဲ့ ဒေါသမုန်တိုင်းကြောင့်ပဲ
မကြာမတင်မှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာမို့စ် ခေါင်းဆောင်တဲ့ ဖိလစ်ပိုင်စစ်တပ်က အတိုက်အခံခေါင်းဆောင်သစ် မုဆိုးမ ကိုရာဇန်အကွီနိုနဲ့ ပေါင်းသွားခဲ့တယ်။
အဲဒီနောက် အာဏာရှင်မားကို့စ် ဖနောင့်နဲ့တင်ပါး တသားတည်း ပြေးခဲ့ရပါလေရောလား။ ဒီကနေ့အထိ မျက်စိထဲက မထွက်သေးတဲ့ ဖြစ်ရပ်ပါ။
အဲဒီလို နမူနာမျိုးတွေ ရှိနေလေတော့ နအဖအနေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အိမ်ထဲမှာနေရင်း တစုံတခုဖြစ်သွားမှာ မျိုးတော့ လုံးဝအဖြစ်မခံရဲမှာ
အသေအချာပါပဲ (ဒီပဲယင်းမှာ သွားရင်းလာရင်း ၀ိုင်းအရိုက်ခံရတာမျိုးက တမျိုးပေါ့လေ။ အဲဒီတုန်းကလည်း မပြောကောင်း မဆိုကောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
အသက်ပါသွားခဲ့လို့ကတော့ မြန်မာပြည်သူ လူထုရဲ့ ဒေါသနဲ့ ဗိုလ်သန်းရွှေတို့ လူသိုက် အခုလောက်ဆို စစ်ဘောင်းဘီတခြား ကိုယ်တခြား ဖြစ်နေလောက်ပြီ ထင်ပါရဲ့)။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တခုခုဖြစ်သွားခဲ့ရင် ပေါက်ကွဲထွက်လာမယ့် (ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အားကိုးအားထားပြု လေးစားကြည်ညိုတဲ့)
မြန်မာပြည်လူထုကြီးရဲ့ သေမထူးနေမထူး ဒေါသကို ဗိုလ်သန်းရွှေတို့ နအဖတသိုက် စိုးရွံ့လို့ပါပဲ။
အဲဒီတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တစုံတခုဖြစ်မှာကို စိုးရွံ့မယ့် နအဖအနေနဲ့ သူတို့မသိဘဲ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်ခြံဝင်းထဲကို လူတယောက်လုံးမပြောနဲ့ ခွေးတကောင် မျက်စိလည်လမ်းမှားပြီး ၀င်မယ်ဆိုရင်တောင် ခွင့်ပြုမှာ မဟုတ်ပါဘူး
(ခွေးရူးကိုက်ရင်လည်း အဆင့်မသင့်ရင် အသက်အန္တရာယ် ရှိတတ်တာကိုးခင်ဗျ)။
ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ ယက်တော ၀င်လာတယ်ဆိုတော့ အကြီးအကျယ် စဉ်းစားစရာပေါ့။ ဒါက ပထမတချက်။
နောက်တချက်က ဒီ ယက်တောဆိုတဲ့ အမေရိကန်ကြီးက နအဖက ဖမ်းမိတယ်ဆိုတဲ့ အခုအခေါက်မှ ပထမဆုံးအကြိမ် ခိုးဝင်တာမဟုတ်ပါဘူး။
၂၀၀၈ တုန်းကတည်းက ပထမအကြိမ် ခိုးဝင်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ မိသားစုဆရာဝန် ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းက သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွေဆီ အကြောင်းကြားခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကို အခုတခေါက် မြန်မာပြည်ထဲ ထပ်ဝင်ဖို့ ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ ထပ်ထုတ်ပေးတယ်ဆိုတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အိမ်ထဲ ခိုးဝင်ဖူးတဲ့သူမှန်း သိထားရဲ့သားနဲ့
ဘာ့အတွက်ကြောင့် ဗီဇာထပ်ထုတ်ပေးသလဲဆိုတာ စဉ်းစားစရာ ဖြစ်မနေပေပြန်ဘူးလား။ ဒါက ဒုတိယတချက်။
အဲဒီတော့ ပထမအချက်က ကိုယ်ဖမ်းထားတဲ့ လူထုခေါင်းဆောင်ရဲ့ လုံခြုံရေးကို တာဝန်မယူနိုင်မှု၊ ဒုတိယအချက်က သိသိကြီးနဲ့ ထောင်ချောက်ဆင် ဟပေးထားမှု၊
အဲဒီနှစ်မှုထဲက တမှုနဲ့တင် နအဖမှာ အပြစ်လုံးဝရှိနေပြီဆိုတာ အသေအချာပြောနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ မိသားစုဆရာဝန်ကို ဖမ်းသွားပြီး
အခုအထိ ဘယ်မှာထိန်းသိမ်းထားမှန်း မသိရတာကလည်း (ဆောင်းပါးရေးပြီးချိန်မှာတော့ ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်း ပြန်လွတ်လာပြီလို့ သိရပါတယ်) နအဖရဲ့ မရိုးမသားလုပ်ကြံမှုကို
ပိုပြီးသံသယကြီးထွားစေပါတယ်။ ဘာတခုမှ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ ရိုးသားမှု မရှိလို့ပါ။
အဲဒီတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ယက်တောကို ဘာဖြစ်လို့ တည်းခွင့်ပြုရတာလဲ ဆိုတဲ့အထိတောင် တောင်တောင်အီအီ စဉ်းစားစရာ မလိုတော့ဘဲ
ဗိုလ်သန်းရွှေတို့ စစ်အုပ်စုရွှေ့တဲ့ ကလေးကွက်က ဘွားဘွားကြီး ပေါ်နေတာကို တွေ့ရမှာပါ။ စဉ်းစားလည်းပဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတာက
ကိုယ့်ကျင့်သိက္ခာနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ နိုင်ငံတကာသိ လူထုခေါင်းဆောင်တယောက်၊
အိမ်မှာလည်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်းနဲ့ သမီးဖြစ်သူ မ၀င်းမမတို့ အတူရှိနေတယ်၊
နောက်ပြီးတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ လူတဖက်သားကို ဒုက္ခရောက် နစ်နာစေလိုတဲ့ ဆန္ဒမျိုး ရှိသူမဟုတ်၊
အဲဒါကြောင့် ယက်တောကို နှင်မထုတ်တာ အဆန်းလားလို့ မေးခွန်းပြန်ထုတ်လိုက်ရုံပေါ့။ ယက်တော ၀င်လာပြီဆိုကတည်းက
နအဖအပြစ် လုံးလုံးကြီး ဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုးလေ။ တကယ်ဆို ရှင်းပြနေစရာတောင် မလိုပါဘူး။
အဲဒီလိုကလေးကွက်ကို နအဖ ဘာကြောင့်ရွှေ့ခဲ့သလဲ။ ရှင်းပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လွှတ်ရက်စေ့တော့ မှာရယ်၊
သူတို့ရဲ့ ကလိန်စေ့ငြမ်းဆင် လမ်းပြမြေပုံအတွက် အနှောက်အယှက်လို့ ယူဆတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က
ို ၂၀၁၀ ကျင်းပပြီးတဲ့အထိ ဆက်ဖမ်းထားချင်လို့ရယ် ကြံရမရဖြစ်ပြီး သူတို့လုပ်မိတာဖြစ်ပါတယ
် (မပိရိတာတခုတော့ နအဖကို သနားဖို့ကောင်းပါတယ်)။ အဲဒီလို သူတို့အပြစ် လုံးလုံးလျားလျားကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပြစ်လို့ ပုံချပြီး
အင်းစိန်ထောင်ကို ခေါ်သွားတယ်ဆိုတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လေးစားကြည်ညိုတဲ့ လူထုအနေနဲ့ ဒေါသအရှိန် အဟုန် မြင့်တက်လာတာ
မဆန်းပေဘူးပေါ့။ နဂိုကတည်းကမှ ကိုယ့်လူထုခေါင်းဆောင်ကို မတရားဖမ်းဆီးချုပ်နှောင် ထားလို့ ဒေါသထွက်နေရတဲ့အထ
ဲ အခုလို ယုတ်မာကောက်ကျစ်လေတော့ ဒေါသအရှိန်ပိုမြင့်ပြီပေါ့။
ဒါပေမယ့် ဒါဟာ လူထုရဲ့ ဦးဆောင်ပါတီ အန်အယ်လ်ဒီအတွက်တော့ အဆိုးထဲက အကောင်းလို့ ပြောရမယ့် အခြေအနေပါ။
ဗိုလ်သန်းရွှေ ရွှေ့လိုက်တဲ့ ကလေးကွက်ကြောင့် လူထုရဲ့ ဒေါသအရှိန်အဟုန် မြင့်လာတာဟာ နအဖစစ်အုပ်စုအတွက်
စိုးရိမ်စရာဖြစ်ပေမယ့် တလျှောက်လုံး မတရားသဖြင့် အနှိပ်ကွပ်ခံခဲ့ရတဲ့ အန်အယ်လ်ဒီပါတီ အတွက်တော့ လူထုအားနဲ့
တိုက်ခွင့်ရမယ့် တကယ့်မဟာအချက်ပါ။ လူထုရဲ့ ဒေါသရေချိန်မြင့်တက်လာချိန်မှာ လူထုတိုက်ပွဲဖော်ပြီး နအဖကို စိန်ခေါ်ဖို့ တကယ့်အခွင့်အခါကောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အန်အယ်လ်ဒီအနေနဲ့ လူထုတိုက်ပွဲကနေ အဆုံးသတ်တိုက်ပွဲအထိ ဦးဆောင်ဖို့ မထင်မှတ်ဘဲ အခွင့်အရေးရတာလို့ ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒါကြောင့်မို့ ဥက္ကဋ္ဌ၊ အတွင်းရေးမှူးအဖြစ်က နှုတ်မထွက်ချင်တဲ့ ဦးအောင်ရွှေတို့၊ ဦးလွင်တို့ အနေနဲ့ ရွှေဝါရောင်တုန်းကလို အိမ်တွင်းပုန်းလုပ်မနေကြဘဲ
လူထုရှေ့က မားမားမတ်မတ်ထွက်ပြီး (သမိုင်းတရားခံ မဖြစ်ရလေအောင်) ရဲရဲတောက် ဦးဆောင်ပေးကြဖို့ အချိန်ကျရောက်နေပြီဖြစ်ပါကြောင်း တိုက်တွန်းရေးသားလိုက်ရ ပါတယ်။
Ref : : ခေတ်ပြိုင်အွန်လိုင်းဂျာနယ်မှာ ဒေါက်တာလွန်းဆွေ၏ ဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည် ။
Posted by မောင်နိုင် at 11:42 AM No comments:
ဟေ့ … ပွဲကတော့ ကြည့်မကောင်းတော့ပါဘူးကွယ်၊ ဘောလုံးပွဲ ဂိုးစည်းအတွင်းမှာ နောက်တန်း ခံစစ်မှူး (ဘက်) တွေက တဖက်အသင်း ရှေ့တန်း တိုက်စစ်မှူး တဦးကို ခြေထိုးခံလိုက်၊ ဖနောင့် ချိတ်နင်းလိုက်၊ ညို့သကြီး ကန်လိုက်၊ အရှိုက် ထောက်လိုက်၊ မျက်နှာ ဖြတ်ရိုက်လိုက်၊ မှောက်လျက်လဲတော့ ချော်လဲရောထိုင် ခေါင်းနဲ့ ဆောင့်လိုက် လုပ်နေကြတဲ့အထဲမှာ၊ လူကျွံဘော တယောက်က ဖြတ်၊ ဖြတ်တဲ့သူက ဖောင်း မဖြစ်၊ လဲနေတဲ့ တိုက်စစ်မှူး သူ မထလာလို့ ဟိုကောင် ဖောင်း ဖြစ်တာ ဆိုတဲ့ပြီး၊ ဒိုင်လူကြီးက ပယ်နယ်တီ မပေးတဲ့ အပြင် အနီရောင် ကတ်တပြပြ ပ ထုတ်တော့မယ့်ပုံ ဖြစ်နေတယ်။
ဒုက္ခ သောကတွေ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ် အကျယ် တစ်ရာ့နှစ်ဆယ် ဥပဒေ ရှည်ချင်တိုင်း ရှည်ခဲ့ပြီ၊ ပြည်သူတွေ ဘက်ကတော့ ကိုယ့်တိုင်းပြည် ကိုယ့်လူမျိုးအတွက် အသက်ပေးပြီး လွတ်လပ်ရေး ရအောင် အကျိုး ဆောင်သွားတဲ့ အမျိုးသားရေး ခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ တဦးတည်းသော သမီးကလေးမို့ ညီမလေး အောင်ဆန်းစုကြည်ကို သနား ကြင်နာကြတာလဲ ရှိတယ်၊ ဖတဆိုးလေးပေါ့နော်၊ မျက်နှာပေါက်ကလဲ အဖေတူ၊ တိုင်းပြည် ချစ်ပုံကလဲ အဖေတူ၊ ခေါင်းမာတာချင်းလဲ တူကြလေတော့ သူ့အဖေလိုပါပဲကလားလို့ ယုံကြည် စိတ်ချ အားကိုးလိုက်ကြတာ။
သူကိုယ်တိုင် ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ခွင့် မရတာတောင် သူ ပါဝင် ဆောင်ရွက်နေတဲ့ အဖွဲ့ကြီးကို မဲဆန္ဒနဲ့ ရွေးပြခဲ့တာ ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ပါပဲ။
ကံဆိုးလိုက်တဲ့ မိန်းခလေးနော်၊ ဖအေ့လက်ပေါ်လဲ မကြီးခဲ့ရ၊ အမေနဲ့လဲ အမြဲမနေရ၊ အကိုကလဲ ဂွကျတတ၊ ဒုက္ခ … ဒုက္ခ … ၊ လင်ဆုံး၊ သားတွေနဲ့ဝေး မြေးကလေးမှ ချီလို့ မရ၊ ဘာမှကို လုပ်လို့ မရတဲ့ဘဝ၊ အချိန်တွေ နှမျောလိုက်မှာ သိတယ်ကွယ်။
ဒီမိုကရေစီရေးအရ နိုင်ငံ ဝန်တာ ကျလာတော့လဲ သွေးမပျော့ရှာပါဘူး၊ ချောင်းမရှောင် မြစ်မရှောင် သေနတ်နဲ့ဖြောင်မယ် ဆိုလဲ မရှောင်၊ သူ့အဖေ ယူပေးတဲ့ လွတ်လပ်ရေး ကုလားထိုင်ပေါ် ထိုင်စားနေရပါလား ဆိုတဲ့ အသိမှ မရှိကြတော့တဲ့ ငရဲသွားမယ့် လူမိုက်တွေ ရိုက်ကြ တိုက်ကြတာလဲ ခံရ၊ ရေရှည်ရက်ဆွဲ တယောက်ထဲလဲထား၊ ရူးမသွားတာ ကံကောင်း။
အကြောင်းမကောင်းတဲ့ ညီမစုလေးနဲ့ ဘဝတူ မောင်နှမများ အတွက် တို့တွေ အားလုံး ဝိုင်းပြီး ဆုတောင်းကြရအောင်။
အမြန်ဆုံး အေးချမ်းသာယာ ပြည်မြန်မာ ဖြစ်လာပါစေ
မြန်မာပြည်သား အားလုံး စုရုံး ပျော်မွေ့ ပြန်တွေ့နိုင်ကြပါစေ
မေ ၁၅၊ ၂၀၀၉
Posted by မောင်နိုင် at 2:04 AM No comments:
Myanmar democracy activist held in prison
YANGON, Myanmar – Myanmar's jailed democracy leader Aung San Suu Kyi insists she is not guilty of violating her house arrest, her lawyer said Friday, asaclearer picture emerged of the American who swam to her home and kicked off the junta's latest crackdown.
Ahead of Suu Kyi's trial Monday, the Nobel Peace Prize laureate spent the night at the country's notorious Insein Prison where she is being held ina"guest house" within the compound during her trial proceedings, said her lawyer Kyi Win.
Worldwide condemnation has poured in since Suu Kyi was charged Thursday with breaking the terms of her yearslong detention, just two weeks before she was due to be released. Her trial was scheduled to be held ataspecial court at the prison, which has held numerous political prisoners over the years.
World leaders, human rights groups and fellow Nobel laureates denounced the move as an attempt by the military junta to silence its chief opponent ahead of next year's election — which will be the first since Suu Kyi's party won elections in 1990 that the junta refused to recognize.
Secretary of State Hillary Rodham Clinton and U.N. Secretary-General Ban Ki-moon condemned the charges and called for Suu Kyi's immediate release.
"If the 2010 elections are to have any semblance of credibility, she and all political prisoners must be freed to participate," British Prime Minister Gordon Brown said.
The Singapore government said it "is dismayed" by the charges against Suu Kyi, one of the few criticisms to come from Myanmar's neighbors in Southeast Asia, who abide byamuch-criticized policy of not interfering in each others affairs.
The charges followamysterious visit to her home by John William Yettaw, 53, an American who swam acrossalake and sneaked into her home seeking food andaplace to rest.
It was the second time Yettaw had made the trip after swimming across the lake last summer, but on that visit the house staff kept him from speaking to Suu Kyi, his wife, Betty Yettaw told The Associated Press in an interview outside her home near Camdenton in southern Missouri.
"I think that's what motivated him to go back. He thought he could be in and out," she said, describing her husband as eccentric but peaceloving and "not political at all."
Before making the latest trip, Yettaw left his 10-year-old and three teenagers with friends, then visited his former wife in California last month and told her he had to go to Asia to work onapsychology paper about forgiveness, according to his ex-wife Yvonne Yettaw.
John Yettaw belongs to the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, commonly known as the Mormons, said Yvonne Yettaw, adding that it was unlikely he was in Southeast Asia to proselytize for the church or convert the Nobel laureate.
Yvonne Yettaw, speaking from Palm Springs, California, told the AP that her ex-husband lived on veteran's disability benefits, supplemented by occasional construction work. She said he had been studying psychology and writingapaper about forgiveness after trauma, and went to Southeast Asia for research but he was "real secretive" about his journey.
Suu Kyi has already spent 13 of the last 19 years in detention without trial for her nonviolent promotion of democracy. She was scheduled to be freed May 27 after six consecutive years of house arrest but now faces up to five years in prison if convicted of violating the terms of her detention, said one of her lawyers, Hla Myo Myint.
"Daw Suu understands the law and told me, 'I did not break the law," said her chief lawyer Kyi Win, who met with Suu Kyi on Thursday. "Daw" isaterm of respect for older women.
"She did not contact the swimmer, he came in as an intruder and she's not guilty," said Kyi Win, who attended the Thursday arraignment and met with Suu Kyi.
According to the restriction order under which Suu Kyi is held, she is prohibited from having contact with embassies, political parties and "associated persons" and she is barred from communicating with the outside world by telephone or mail, he said.
Myanmar citizens are required to report overnight visitors to local authorities but Suu Kyi's "did not report him because she did not want to see anyone arrested because of her."
Yettaw was arrested May6for allegedly swimming acrossalake to secretly enter Suu Kyi's home and staying there for two days. He was brought to the same courtroom Thursday as Suu Kyi and charged with illegally enteringarestricted zone, which carriesamaximum penalty of five years in prison, and breaking immigration laws, which is punishable by up to one year in jail.
The junta scheduled elections as part of its so-called "roadmap to democracy," but the effort is widely perceived asaguise for continued military control.
Parliamentary rule was overthrown byacoup in 1962, and the army has been in control since then. It held an election in 1990 but refused to honor the results after Suu Kyi's National League for Democracy party won inalandslide.
Ref : : Yahoonews
Posted by မောင်နိုင် at 10:21 AM No comments:
ထိန်းသိမ်းခံနေရသူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အိမ်သို့ အမေရိကန် တဦး ဝင်ရောက်မှု နှင့် စစ်အစိုးရ၏ နောက်ဆက်တွဲ အရေးယူ ဆောင်ရွက်ချက်များမှာ အများက စိတ်ဝင်တစား ဝေဖန် ပြောဆိုနေကြသည့် အကြောင်းအရာ ဖြစ်နေသည်။
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က အမေရိကန် နိုင်ငံသား ဂျွန် ဝီလျံ ယက်တောသည် လုံခြုံရေး တင်းကျပ်သော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အိမ်သို့ ဝင်ရောက်ပြီး အပြန်တွင် ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရသည်။ အိမ်ရှင်ဖြစ်သူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်း အာဏာပိုင်တို့ လျစ်လျူမရှုခဲ့ပေ။ ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် အာဏာပိုင်တို့က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အင်းစိန်ထောင်သို့ ပို့ဆောင်ပြီး ကန့်သတ်ချက် ဖောက်ဖျက်မှုဖြင့် တရားစွဲလိုက်သည်။
စစ်အစိုးရက ဤဖြစ်ရပ်ကို ၎င်းတို့၏ အကျိုးအတွက် အသုံးချခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ထင်ရှားသည့် မြန်မာဘလော့ဂါ အောင်သာငယ်က သုံးသပ်သည်။
“နအဖရဲ့ လုပ်ဇာတ်လေ။ ဒေါ်စုကို ထောင်ထဲ ထည့်မယ်၊ ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲမှာ သူ့သြဇာ မပါအောင် ကြိုတင် ဖြိုဖျက်တာပဲ။ ဒါမှ သူတို့ ပြောနေတဲ့ ဥပဒေတွေနဲ့ ကိုက်မှာကိုး။ ဒေါ်စုဟာ ပြင်ပက အဆက် အသွယ်တွေ ရှိတယ်၊ နိုင်ငံခြား သြဇာခံတွေ ရှိတယ်ပေါ့ဗျာ” ဟု ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ရောက် ဘလော့ဂါ အောင်သာငယ်က ပြောသည်။
ရန်ကုန် အခြေစိုက် စာနယ်ဇင်းသမား တဦးက အမေရိကန် နိုင်ငံသားသည် စစ်အစိုးရနှင့် ပတ်သက်ခြင်းမရှိဟု ယူဆသည်။
“ယက်တော ဆိုတဲ့သူကတော့ သူ့စိတ်ကူးနဲ့သူ လုပ်ချင်တဲ့ဟာကို လုပ်သွားတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို သိက္ခာချဖို့ ကြံစည်နေတဲ့ နအဖက အဲဒီ အဖြစ် အပျက်အပေါ်မှာ အကျယ်ချုပ် သက်တမ်း တိုးဖို့၊ ဖမ်းဆီးတာ သက်တမ်းရှည်ဖို့ အတင်း အဓမ္မ ခွင်ဆင်တာ လို့ မြင်တာပါပဲ” ဟု အဆိုပါ စာနယ်ဇင်းသမားက ပြောသည်။ “ဆင်တဲ့ခွင်က မသင့်တော်လည်း အတင်းလုပ်တဲ့ သဘောပါပဲ” ဟု ဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်း ရေးသားလေ့ရှိသည့် ထင်ရှားသော ဘလော့ဂါတဦးဖြစ်သူ မင်းဒင် ကလည်း ယခု လူပြောများနေသော ဖြစ်ရပ်မှာ သွေးရိုးသားရိုးမဟုတ်နိုင်ဟု ပြောသည်။
“သံသယ အမြင်နဲ့ စွပ်စွဲတာမျိုးကို ကျနော် မပြောချင်ပေမယ့် အာဏာအတွက် လူစုပြီး ချောင်းရိုက်တတ်တဲ့ စစ်သားအမည်ခံ ကိုယ်ကျိုးရှာ၊ အာဏာရှင်တွေဟာ မဟုတ်၊ မတရားတာကို လုပ်ဖို့ ဘယ်တုန်းကမှ လက်မနှေးခဲ့တာကြောင့် ယက်တောကိစ္စမှာလည်း သွေးရိုးသားရိုးလို့ ကျနော် မယူဆနိုင်ပါဘူး” ဟု သုံးသပ်ပြသည်။
ဤအမှုမှာ ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ်မှ ၅ နှစ်အထိ သို့မဟုတ် ဒဏ်ငွေ သက်သက်၊ ဒဏ်ငွေ ၅ဝဝဝ ချမှတ်နိုင်သည့် အမှု ဖြစ်သည်ဟု ရန်ကုန်မှ ရှေ့နေကြီး ဦးအောင်သိန်းက ရှင်းပြသည်။
နိုင်ငံတကာတွင်လည်း လွတ်ရက်စေ့တော့မည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် တရားစွဲဆိုမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး တုံ့ပြန် ပြောဆိုမှုများ ရှိနေသည်။
သြစတေးလျ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး စတီဖင်စမစ်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ဖမ်းဆီးမှုမှာ “အလွန်တရာ စိုးရိမ်ဖွယ်” ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
ယခုဖြစ်ရပ်တွင် အဓိကပုဂ္ဂိုလ် တဦး ဖြစ်သူ ဂျွန် ဝီလျံ ယက်တောသည် ယခုအချိန်အထိ အဖွဲ့အစည်း တခုခုနှင့် ပတ်သက်သည် ဟူသော သတင်း ထွက်ပေါ်လာခြင်း မရှိပေ။ သာမန် အရပ်သား တဦးသာ ဖြစ်သည် ဟု ဆိုသည်။
သူ၏ သားဖြစ်သူ ပေါလ်နက်ရိုက AP သတင်းဌာနသို့ ပြောပြရာတွင် ဂျွန် ဝီလျံ ယက်တောသည် နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှုများတွင် စိတ်ဝင်စားမှု မရှိဟု ဆိုသည်။
“ဂျွန်က အန္တရာယ် မပေးတတ်သလို နိုင်ငံရေးလည်း စိတ်မဝင်စားပါဘူး။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဒုက္ခပေးဖို့ စိတ်ကူးမရှိပါဘူး” ဟု ပေါ်လ်နက်ရိုက ပြောသည်။
“ဂျွန်က ဆီးချိုရောဂါရှိသည်၊ ကျန်းမာရေး ကောင်းတာလည်း မဟုတ်ဘူး”ဟု ဆိုသည်။ ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်ခြင်း မရှိသဖြင့် မှန်ကန်စွာ ဆုံးဖြတ်နိုင်မည် မဟုတ်ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ယခုအချိန်အထိ ဂျွန် ဝီလျံ ယက်တော၏ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဂျွန် ဝီလျံ ယက်တောနှင့် တွေ့ခွင့် ရခဲ့သော ရန်ကုန်မြို့ အမေရိကန် ကောင်စစ်ဝန်ထံမှ လည်းကောင်း၊ စစ်အစိုးရ ထံမှ လည်းကောင်း ပြည့်စုံသည့် ပြောကြားချက် ထွက်ပေါ်လာခြင်း မရှိသေးပေ။
ပြည်ပရောက် နိုင်ငံရေးသမားဖြစ်သူ ကိုငွေလင်းက ဤဖြစ်ရပ်တွင် မြှုပ်ကွက်များ ရှိနိုင်သည်ဟု ခန့်မှန်းနေသည်။
“သံသယ ဖြစ်စရာတွေ တွေ့ရတယ်။ တကယ်တော့ ဒီနေရာက လုံခြုံရေး စည်းကြပ်ထားမှုအရ ဆိုရင် ဝင်လို့ကို မရတဲ့ နေရာဖြစ်တယ်။ ဒီလို လုံခြုံရေး အခြေအနေ ရှိတဲ့ ဒီနေရာကို လာခွင့် ရသွားတယ်။ မမြင်ချင် ယောင်ဆောင်တာ ဒါမှမဟုတ် ဝင်ရောက်ခွင့် ပေးလိုက်တာမျိုး မဟုတ်ဘဲနဲ့တော့ ဝင်လို့ ရစရာ အကြောင်း မရှိဘူး။ သူ့ရဲ့ကျူးကျော်မှုမှာ အစိုးရ သော်လည်းကောင်း၊ လုံခြုံရေး ဝန်ထမ်းတွေ သော်လည်းကောင်း ပါဝင်နေတယ် လို့ ကျနော် သုံးသပ်မိတယ်” ဟု ကိုငွေလင်းက ဧရာဝတီကို ပြောပြသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်ရက်စေ့ခါနီးတွင် အစိုးရက သူ့ကို ပြန်လည် ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန် ကြိုတင် ကြံစည် ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်မည်ဟု သံသယရှိမိကြောင်း ကိုငွေလင်းက ရှင်းပြသည်။
Posted by မောင်နိုင် at 5:16 AM No comments:
နအဖ ဗိုလ်မှူးချုပ် တစ်ဦး တိုက်ပွဲကျ
နအဖစစ်တပ်နှင့် ကရင်အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (KNLA) တပ်မဟာ၂ ဌာနချုပ် လက်အောက်ခံ တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ယခုလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် တိုက်ပွဲ၌ နအဖတပ်မှ ဗိုလ်မှူးချုပ် အဆင့်ရှိသူ တစ်ဦးကျ ဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ တိုက်ပွဲတွင် ကျဆုံးသည့် အသက် ၄၉ နှစ်ရှိ ဗိုလ်မှူးချုပ် ကောင်းမြတ်သည် ရခိုင်ပြည်နယ် တောင်ကုတ် အခြေစိုက် အမှတ် (၅) စစ်ဆင်ရေး ကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ်မှ ဖြစ်သည်ဟု မြန်မာ စစ်တပ် အသိုင်းအ၀န်းနှင့် KNLA တို့မှ အတည်ပြု ပြောဆိုသည်။
ယခုကဲ့သို့ မြန်မာစစ်တပ်ဘက်မှ အဆင့်မြင့် အရာရှိတဦး ကျဆုံးမှုသည် ၁၉၄၈ ခုနှစ်မှ စတင်၍ ပထမဆုံးအကြိမ် ဖြစ်ကြောင်းလည်း စစ်ရေး လေ့လာသူများ၏ ပြောဆိုချက်အရ သိရသည်။
ကျဆုံးသူ ဗိုလ်မှူးချုပ် ကောင်းမြတ်သည် ကရင်ပြည်နယ် ဒေသအတွင်းရှိ နအဖ တပ်စခန်းများရှိသော ဘူဆာခီးနှင့် နောဆိုး လက်နက်ကြီး စခန်းများအား လိုက်လံကြည့်ရှု စစ်ဆေးပြီး အပြန် လမ်းခုလပ် တနေရာ၌ ဖြစ်ပွားသည့် ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲတွင် ကျဆုံးရခြင်း ဖြစ်သည်ဟု KNU တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး (၁) ဖဒို စောလှငွေက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
"ကျနော်တို့ဆီက တပ်ဖွဲ့တွေက ကားလမ်းကို ဖြတ်ဖို့လုပ်နေတဲ့ အချိန်မှာ သူတို့ (နအဖ) ကားတန်း ဆင်းလာတဲ့ အချိန်နဲ့ ထိပ်တိုက်တိုးပြီး ၁၀ မိနစ်ခန့်အကြာ တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်"ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ယင်း ဗိုလ်မှူးချုပ် ကောင်းမြတ်၏ ရုပ်အလောင်းကို ညတွင်းချင်းပင် နေပြည်တော်သို့ သယ်ဆောင်သွား သည်ဟုလည်း ဖဒို စောလှငွေက ဆိုသည်။
ဗိုလ်မှူးချုပ် ကောင်းမြတ်သည် ပဲခူးတိုင်းနှင့် ကရင်ပြည်နယ် အတွင်းမှာရှိ ဒေသခံ ရွာသားများကို လမ်းတံတား ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် အဓမ္မလုပ်အားပေး ခိုင်းစေခြင်း၊ ကြမ်းတမ်းစွာ ပြုမူဆက်ဆံခြင်းများ ပြုလုပ်သူ ဖြစ်ကြောင်း အတိုက်အခံ သတင်းရပ်ကွက်များက ပြောသည်။
၎င်းသည် အမှတ်စဉ် ၂၃ စစ်တက္ကသိုလ် ကျောင်းဆင်းဖြစ်ပြီး ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှ စတင်၍ အမှတ် (၅) စစ်ဆင်ရေး ကွပ်ကဲမှု ဌာနချုပ်မှူး ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ယခုတိုက်ပွဲတွင် နအဖဘက်မှ အင်အား ၁၀၀ ခန့်ရှိကြောင်း ကရင်သတင်း ရပ်ကွက်က ဆိုသည်။ နှစ်ဘက် အထိအခိုက် အကျအဆုံးကိုမူ မသိရှိရပေ။
KNLA ၏ အဆိုရ ၂၀၀၉ ခုနှစ် ပထမ လေးလအတွင်း မြန်မာစစ်တပ်မှ အရာရှိ ၁၂ ဦးအပါဝင် တပ်သားအဆင့် ၂၂၅ ဦးကို ချေးမှုန်းနိုင်ခဲ့ပြီး ၄၄၃ ဦး ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ကြောင်း၊ KNLA ဘက်မှ ၇ ဦးကျဆုံး၍ ၅ ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဧပြီလကုန်ပိုင်းက ကရင်ပြည်နယ် ကော့ကရိတ် မြို့နယ် ဝေါ်လေခီး ဒေသရှိ KNLA တပ်ရင်း ၂၀၁ စခန်းကို မြန်မာစစ်အစိုးရနှင့် တိုးတက်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ ကရင်အမျိုးသား တပ်ဖွဲ့ (DKBA) တို့ ပူးပေါင်း၍ တိုက်ခိုက် သိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။
၁၉၄၈ ခုနှစ်မှ စတင်၍ မြန်မာစစ်အစိုးရနှင့် ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး (KNU) လက်အောက်ခံ KNLA တပ်ဖွဲ့ တို့သည် တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် KNLA ဌာနချုပ်ကို ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်သို့ ရွှေ့ပြောင်း အခြေစိုက်ခဲ့သည်။
Posted by မောင်နိုင် at 7:29 AM No comments:
တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားလျှော့ချမည့် ကိစ္စ ဒီကေဘီအေ အတွင်း သဘောထားကွဲ
တိုးတက်သောကရင်ဗုဒ္စဘာသာအဖွဲ့ (ဒီကေဘီအေ) ကို နယ်ခြားစောင့်တပ်အဖြစ် မြန်မာစစ်အစိုးရက ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းပေးမည်ကို သဘောတူလက်ခံသော်လည်းတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားလျှော့ချမည့် ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ဒီကေဘီအေအတွင်း သဘောထားကွဲလွဲမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေသည်ဟု အဖွဲ့၏အဆင့်မြင့်အရာရှိတဦးက ပြောသည်။၎င်းက "၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲပြီးရင် ဒီကေဘီအေကို နိုင်ငံတော်က နယ်ခြားစောင့်တပ်အဖြစ် အသွင်ပြောင်းမှာကို သဘောတူပေမယ့် တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား လျှော့ချမယ့် ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး သက်ဆိုင်ရာဒေသအသီးသီးက ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ဗဟိုအဆင့်ခေါင်းဆောင်တွေ သဘောထားကွဲနေကြလို့ ဒီလဆန်းကနေ စပြီးတော့ ဌာနချုပ်မှာ အစည်းဝေးထိုင်နေရတယ်" ဟု ပြောသည်။
ဒေသတခုတွင် ရှိသည့် တပ်ရင်းတရင်းကို တပ်ဖွဲ့ဝင် (၃၀၀) သာ ကန့်သတ်ထားကာ တပ်ရင်းမှူးနဲ့ ဒု-ရင်းမှူးမှာ ဒီကေဘီအေက အရာရှိဖြစ်သော်လည်း
ကျန်သည့် အထက်အဆင့်နှင့် အောက်ခြေအဆင့်များကိုတပ်မတော်က အဆင့်ဆင့်ကွပ်ကဲအုပ်ချုပ်သွားမည် ဖြစ်သည့်အတွက်
အစည်းအဝေးထိုင်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဒီကေဘီအေမှ အဆိုပါ အဆင့်မြင့်အရာရှိက ပြောသည်။
ဒီကေဘီအေအနေဖြင့် နိုင်ငံတော်နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးရယူထားသည့် အဖွဲ့အချို့ကဲ့သို့ ပါတီထောင်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရန် လုံးဝအစီအစဉ်မရှိကြောင်း၊
နအဖစစ်ဖက်ရေးရာလုံခြုံရေးအရာရှိချုပ် ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲမြင့် ပြောကြားခဲ့သည့်အတိုင်း နယ်ခြားစောင့်တပ်အဖြစ် အသွင်ပြောင်းမည်ကို သဘောတူညီခဲ့သော်လည်း ယခုကဲ့သို့ တပ်အင်အားအဆပေါင်းများစွာ လျှော့ချမည့်ကိစ္စကို ဒီကေဘီအေ ခေါင်းဆောင်အချို့က သဘောမတူကြဟု သိရသည်။
ဒီကေဘီအေဖွဲ့စည်းပုံအရ မြိုင်ကြီးငူဗဟိုဌာနချုပ်အပါအ၀င် လက်အောက်ခံ (၃၃၃၊ ၅၅၅၊ ၉၉၉) စသည့်တပ်မဟာ (၃) ခုရှိပြီး
လက်နက်ကိုင်အင်အား (၃,၀၀၀) ခန့်ရှိသည်ဟု ဒီကေဘီအေ မှတ်တမ်းအရ သိရှိရကာ နအဖသတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း
တပ်အင်အားလျှော့ချမည်ဆိုပါက တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား (၉၀၀) ခန့်သာ ကျန်ရှိမည်ဖြစ်သည်ဟု သိရှိရသည်။
ဒီကေဘီအေအဖွဲ့သည် ၁၉၉၄ ခုနှစ်က ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (ကေအန်ယူ) မှ ခွဲထွက်ခဲ့ပြီး
မြန်မာစစ်အစိုးရ၏ ကျောထောက်နောက်ခံဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
ထိုစဉ်က ခွဲထွက်မှုကို ဦးဆောင်ခဲ့သည့် ဒု-အရာခံ ဗိုလ် စောကျော်သန်းသည် လက်ရှိ ဒီကေဘီအေအဖွဲ့၏ စစ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်သည်။
Posted by မောင်နိုင် at 9:33 AM No comments:
သံတမန်များကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ကျေးဇူးတင်ကြောင်...
တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားလျှော့ချမည့် ကိစ္စ ဒီကေဘီအေ အတွင်း ...